Dhaqdhaqaaqa gaadiidka xuduudda Finland ee ka imaanaya wadamada ka baxsan soonaha Schengen waa la xadaynayaa. Xadaymaha shaqaynaya ee soo gelitaanka dalka ka hubi bogagga hawlwadeennada dowladda.
Hadaadan joogin Finland
Haddii aad Finland imaanayso adigoo ka imaanaya meel ka baxsan soonaha Schengen
Adeegga FINENTRY (FINENTRY) ayaa kaa caawinaya in aad xuduudda si degdeg ah uga gudubto
Haddii aad codsanayso sharciga deganaanshaha ee ugu horreeya
Haddii aad Finland joogto
Waddan kasta waad uga soo safri kartaa Finland, haddii aad haysato shahaadada xirmada tallaalka COVID-19 ee buuxda oo la aqbali karo iyo dukumentiyada safarka ee loo baahanyahay.
Haddii aad tahay muwaadin Finnish ah ama aad Finland deggantahay, waxaad markasta xaq u leedahay in aad Finland ku soo laabato.
Haddii aad Finland ku soo laabanayso adigoo dibadda ka imaanaya, u diyaargarow marka aad xuduudda timaado in aad caddayso sababta aad Finland u imaanayso. Waa in aad koontroolka xuduudda tustaa aqoonsigaada ama baasaboorkaada shaqaynaya iyo haddii loo baahdo fiisaha dal-ku-galka ama sharciga deganaanshaha. Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan ka soo gudbidda xuduudaha waxaa laga helaa bogagga Hoggaanka ilaalada xuduudaha.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaRajavartiolaitos
Tilmaamaha ka talaabidda xadkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaValtioneuvosto
Xadaymaha jira ee soo gelista dalkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tilmaanbixinnada loogu talagalay safarka iyo shaqaalaha Finland imaanayaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waajibaadyada waafaqsan sharciga cudurada faafa waxay quseeyaan dhammaan dadka Finland imaanaya. Sidaas darteed waa in aad indha-indhaysaa tilmaanbixinnada saraakiisha caafimaadka, mana ahan mid ku xiran waddanka aad ka soo geleyso Finland.
Marka aad Finland timaado, waxaa xuduudda aad ka soo gashay laguugu hagayaa koontarool caafimaad.
Haddii aad qaadatay tallaal dhammaystiran, waxaad saraakiisha tusi kartaa shahaadada tallaalka.
Haddii uu Koronaha kugu dhacay wax ka yar lix bilood gudohood, waxaad saraakiisha tusi kartaa caddaynta ka bogsashada cudurka.
Haddii aad soo martay baaritaanka Koronaha ugu horrayn 72 saacadood ka hor inti aadan dalka imaan natiijada baaritaanku ay tahay negatif, waxaad shahaadada baaritaanka tusi kartaa saraakiisha.
Haddii aadan haysan shahaado, waxaa laguugu hagayaa baaritaanka ama waxaa lagu siinayaa tilmaan-bixinno ku saabsan, sida aad baaritaanka ku tegeyso.
Xaaladaha qaar marka ay jiraan waa in aad sidoo kale aaddaa baaritaan labaad 3-5 maalmood marka ay ka soo wareegto wakhtigi aad Finland timid. Hay’adda caafimaadka iyo nolowanaaggu waxay kugula talinaysaa, in aad iska ilaaliso xiriirka dhow ee dadka, illaa aad ka heleyso natiijada negatifka ah ee baaritaankan labaad.
Uma baahnid in marka aad dalka soo geleyso aad marto baaritaannada fayruska Koronaha, haddii aad haysato caddaynta xirmada tallaalka COVID-19, tallaalki ugu dambeeyayna ay ka soo wareegtay ugu yaraan 7 maalmood ama caddayn ah in cudurku fayruska Koronuhu uu kugu dhacay muddo 6 bilood gudaheed ah, taas oo baaritaan shaybaar lagu caddeeyay. Baaritaanku waa qasab marka lagu jiro xaaladaha kale.
Muwaadiniinta Midowga Yurub iyo dadka soonaha deggan waxay heli karaan shahaadada Koronaha ee dijitaalka ah ee Midowga Yurub, taas oo ay dhammaan wadamada Midowga Yurub aqbalayaan marka gaadiidka la raacayo. Dadka Finland deggan waxay shahaadada Koronaha ee Midowga Yurub ka helayaan adeegga Omakanta.fi.
Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga.
Shahaadada KoronahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEuropa.eu
Shahaadada Koronaha ee Midowga YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waxaad safarka kahor billowdaa isticmaalka adeeggan. Adeegga FINENTRY waxaad ka heleysaa tilmaanbixinno shakhsi ah oo ku saabsan, waxa ay tahay in aad samayso, marka aad Finland timaado xilliga safmarka. Adeegga FINENTRY waxaad:
ka qabasan kartaa wakhtiga baaritaanka Koronaha ee Finland gudaheeda lagu qaado,
ka heli kartaa farriin qoraal ah oo ku saabsan tilmaanbixinnada imaanshaha baaritaanka,
farriin qoraal ah ku heli kartaa natiijada baaritaanka.
Adeeggu wuxuu ku shaqeeyaa luqado badan. Waxaad sidoo kale ogaataa tilmaanbixinnada iyo xadaymaha la xiriira imaanshaha dalka.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaFINENTRY
Tilmaanbixinnada waxqabadka safarka ee marka lagu jiro xaaladda KoronahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Fayruska Korona dartiis ayeey Finland xadaysay qabashada iyo ka baaraandegista codsiyada fiisooyinka iyo sharciga deganaansha ee safaaradaha. Adeegga shabakadda Enter Finland ee Hoggaanka socdaalka ayaad weli ka codsan kartaa sharciga deganaanshaha Finland ama diiwaangelinta xuquuqda joogitaanka dalka.
Si kastaba ha ahaatee waa in aad tagtaa safaaradda Finland ama goobta adeegga ee Hoggaaanka socdaalka, kahor inta aan la gelin ka baaraandegista codsigaada. Inta badan waxaa lagaa rabaa in aad is-caddayso saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa marki aad codsiga samaysay. Xaaladda fayruska koronaha dartiis ayaa waxaa si ku meelgaar ah loo dheereeyay wakhtiga is-caddaynta oo laga dhigay illaa iyo 1.10.2022. Ka fiiri xaaladda safaaradda adiga kuu adeegaysi cinwaanka finlandabroad.fi.
La soco ogeysiisyada macaamiisha ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Finland iyo Hoggaanka socdaalka.
Saafaradaha Finland ee dibadda ku yaalLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad Finland u soo guuraysoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad Finland megangelyo ka codsanayso
Ka codso Finland megnagelyo adigoo si shakhsi ah ugu tegaya hay’adda ilaalada xududuaha ama booliska. Inti lagu jiro xaaladda fayruska Korona xittaa Finland waad imaan kartaa megangelana waad ka codsan kartaa. Saraakiisha baaritaanka xuduudaha ku wargeli in aad doonayso in aad megangelyo codsato.
Haddii aad Finland joogto islamarkaasna aad codsanayso sharciga deganaanshaha ama sharciga siiscoda, waa in aad ku xisaabtantaa arrimahan soo socda:
Xaaladda fayruska Korona darteed ayaa waxaa goobaha adeegga ee Hoggaanka socdaalka looga danaysan karaa ballan laga qabsado oo kaliya, taas oo laga qabsan karo nidaamka ballan qabsashada ee Hoggaanka socdaalka ,
Codsiyada badankooda waxaad ka sameysan kartaa adeegga shabakadda Enter Finland ee uu maamulo hoggaanka socdaalka kaas oo uu cinwaankiisu yahay enterfinland.fi.,
Inta badan waxaa lagaa rabaa in aad is-caddayso saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa marki aad codsiga samaysay. Xaaladda fayruska koronaha dartiis ayaa waxaa si ku meelgaar ah loo dheereeyay wakhtiga is-caddaynta oo laga dhigay illaa iyo 1.10.2022.
Tilmaanbixinnada rasmiga ah ee ku saabsan codsashada sharciga deganaanshaha iyo ka danaysashada goobta adeegga inta lagu jiro safmarka Korona waxaad ka helaysaa bogagga shabakadda Hoggaanka socdaalka.
Tilmaamaha Hay’adda socdaalka ee xaaladda Korona Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Tilmaamaha Hoggaanka socdaalka ee loogu talagalay ajaanibta Finland degganLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Adeegga wakhti ballansashadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan saamaynta Koronaha ee Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland: Korona fayraska COVID-19 .